साढे २३ किलो अवैध सुनकाण्डमा सुरज : डीआईजीको ‘घुस उठाउने’ घुमुवादेखि सुन तस्करसम्म – NagrikPath
कञ्चनपुरमा २३ किलो ६ सय ग्राम सुन बरामद भएपछि नेपाल प्रहरीका जवान सुरज तिरुवा चर्चामा छन् । तिरुवाको घर र ससुरालीबाट सुन बरामद भएको हो ।
कञ्चनपुरमा मात्रै २ दिनको अवधिमा प्रहरी नै जोडिएका व्यक्तिको घरमा २३ किलो अवैध सुन बरामद भएपछि थुप्रै सवाल पैदा भएका छन् । सुन तस्करीमा क–कसको हात छ ? कहाँबाट र कसरी आयो यति ठूलो परिमाणको सुन ? आमचासोको सवाल बनेको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) को टोलीले बिहीवार कञ्चनपुर जिल्लाको पुर्नवास नगरपालिका–२ दशरथबस्तीका स्थानीय शंकर भनिने भरत विकको घरमा जमिनमुनि लुकाइएको अवस्थामा १८ किलो सुन बरामद गर्यो । १२ घण्टा बित्न नपाउँदै प्रहरीले पुनः कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा नगरपालिका–११ अमरपुरका स्थानीय तथा प्रहरी जवान सुरज तिरुवाको घरगोठमा गाडिएको अवस्थामा ५ किलो ६ सय ग्राम सुन बरामद गर्यो । बिहीवार सुन भेटिएको घर तिरुवाको सुसुराली घर हो ।
प्रहरीले हाल सुरज र उनका दाजु लक्ष्मण तिरुवालाई नियन्त्रणमा लिएको छ । सुरजका दाजु लक्ष्मण भारतीय व्यापारीको सवारी चालकको रुपमा काम गर्दै आएका थिए । सुनकाण्डको थप अनुसन्धानका लागि राजस्व अनुसन्धान कार्यालय कोहलपुर पठाइएको छ ।
डीआईजीको ‘घुस उठाउने’ घुमुवा !
हाल जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीमा कार्यरत तिरुवा त्यसअघि लामो समयसम्म क्षेत्रीय अपराध अनुसन्धान समूह (आरआईटी) मा क्रियाशील थिए । अपराध अनुसन्धानको नाममा उनीलगायत प्रहरीको टोलीले विभिन्न तस्कर र आपराधिक घटनामा संलग्न व्यक्तिबाट घुस रकम असुलेर क्षेत्रीय प्रहरी कार्यालयका प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) लाई बुझाउँदै आएको स्रोतको दाबी छ ।
सुदूरपश्चिमका दक्षिणी सीमा क्षेत्रमा हुने तस्करीबाट घुस उठाउने सिलसिलामा तिरुवा सुन तस्करहरूको सम्पर्कमा समेत पुगेको हुन सक्ने प्रहरी स्रोतको अनुमान छ । सुन तस्करको सम्पर्कमा पुगेपछि आर्थिक प्रलोभनमा परेर तिरुवा सुन तस्करहरूलाई नै सघाउन थालेका बताइएको छ ।
आरआईटीका घुमुवाहरू यसअघि चोरीका मोटरसाइकल बिक्री प्रकरणमा समेत मुछिएका थिए । तर प्रहरी नेतृत्वको साथ पाएपछि उन्मुक्ति पाएको स्रोतले जनाएको छ । प्रहरीभित्रै कमिशनको विषयमा कुरा नमिलेपछि सुन तस्करी प्रकरण घटना बाहिर आएको जनाइएको छ ।
तिरुवासहित घुमुवाको टीम चोरीका मोटरसाइकल र चरेश तस्कारीमा समेत संलग्नता रहेको आरोप लगाइएको छ । ‘तिरुवा एउटा सानो प्रतिनिधि पात्र मात्रै हुन्, उनी लगायतको टोलीले प्रहरीको उच्च अधिकारीको ठाडो निर्देशनमा तस्कर र व्यापारीबाट पैसा असुलीको धन्दामा हिँड्ने गर्दथें,’ कञ्चनपुरका वाइसीएल नेता अर्जुन साउँदले भने, ‘१ वर्षअघि नै घुस असुल्ने घुमुवालाई कारवाहीको माग गरिएको थियो । त्यतिबेला कसैले सुनेनन् । अहिले सुनसहित पक्राउ परे ।’
चोरीका मोटरसाइकलमा संलग्नता
आरआईटी समूहले २०७४ जेठ ४ गते कञ्चनपुरकै कलुवापुरको बन्साह जंगलबाट बरामद भएको से४प २०८५ नम्बरको मोटरसाइकल ईलाका प्रहरी कार्यालय झलारीमा बुझाइएको थियो । तर ईलाका प्रहरीले बरामद मोटरसाइकल भन्सारमा नबुझाई पुनः आरआईटी समूहलाई नै बुझायो । सोही विषयलाई लिएर वाइसीएल कञ्चनपुरका सदस्य सुरेन्द्र सिंहले आफ्नो फेसबुकमा स्टाटस पोस्ट गरेपछि प्रहरीले उल्टै सिंहमाथि सार्वजनिक मुद्दा चलायो । २०७४ जेठ १७ गते आरआईटी प्रहरीका सई लोकराज भट्ट र जवान सुरज तिरुवाको टोलीले मोटरसाइकल बरामद गरेको थियो । प्रहरीका अवैध गतिविधिको विरोध गर्दै वाइसीएल कञ्चनपुरले जेठ १८ गते प्रेस विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो ।
तत्कालीन वाइसीएल कञ्चनपुरका इन्चार्ज अर्जुन साउँदले लोकान्तरसँग भने, ‘पुलिसभित्र कुरा नमिलेपछि अहिलेको घटना बाहिर आएको हो । आरआईटी तथा बर्दीको आडमा प्रहरीले सांगठनिक रुपमा लूट मच्चाएको छ । सुरज तिरुवा मोहरा मात्रै हुन्, यिनको पछाडि डीआईजीसम्मको हात छ । सबैको सम्पत्ति नै छानबिन गर्नुपर्छ ।’
कञ्चनपुरमै चोरीको मोटरसाइकल नम्बर बनाउने काण्डमा समेत यिनीहरूकै हात रहेको उनले ठोकुवा गरे । आरआईटीमा रहँदा सम्पर्क र सम्बन्ध विस्तार गर्दै तिरुवाले सुन तस्करीसम्म संलग्न हुन पुगेका छन् । तिरुवा पछिल्लो समय जिल्ला प्रहरी कार्यालय कैलालीको घुमुवाका रुपमा कार्यरत थिए । साभारःलाेकान्तर
Previous Previous post: ओली सरकारको चर्चित चार प्रकरण : जसले ‘साख’ घटायो
Next Next post: प्रदेश नं ५को पहिलो वर्ष विकासको आधार तय, आगामी वर्षदेखी गति लिने